အကြောပြင်ကုထုံးအကြောင်း သင်မသိသေးသော အချက် ၁၀ ချက် - Hello Sayarwon
အကြောပြင်ကုထုံးအကြောင်း သင်မသိသေးသော အချက် ၁၀ ချက်
အကြောပြင်ကုထုံးဟာဆိုရင် ကျောရိုးနှင့် အဆစ်အမြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို လက်ဖြင့် အနေအထားပြုပြင်ပြောင်းလဲသော ကုသမှု ဖြစ်ပြီး ဆေးသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသမှု လုပ်စရာမလိုပဲ သဘာဝအတိုင်း ခန္ဓါကိုယ်ကို ပြန်ကောင်း သွားအောင် ကူညီပေးတဲ့ ကုသမှု အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီကုသမှုဟာ သင့်အတွက် အသစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ၎င်းရဲ့ အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိဖို့ရာ သင့်ကို အောက်ပါအချက် ၁၀ ချက်က ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ အကြောပြင်ကုသမှုဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုလျက်ရှိသည်
၎င်းကုသမှုဟာ ကမ္ဘာ အနှံ့အပြားမှာ ရေပန်းစားနေပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကစပြီး ရေပန်းမစားခင် ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၎င်းနည်းကို ကျောရိုးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ကုသမှုမှာ အချိန်အကြာကြီး အသုံးပြုနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၀ ကိုရောက်လာတဲ့ အခါမှာ ၎င်းအကြောပြင် ကုသမှုဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ ၊ နယူးဇီလန် နိုင်ငံ၊ တောင်အာဖရိကတို့ မှတစ်ဆင့် ဖြတ်ကျော်လာကာ အာရှ ၊ ဥရောပ၊ လက်တင်အမေရိကားနှင့် ဩစတြေးလျ တို့ကိုပါ ကူးစက်လာပါတယ်။
၂။ အကြောပြင်ကုထုံးဟာ နာကျင်မှု ဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ၎င်း ကုသမှုဟာ ကြွက်သားများ ၊ အဆစ်များ ၊ အရိုးများနှင့် တွယ်ဆက်တစ်ရှူးများရဲ့ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှု မရှိပဲ ထိုင်နေမိခြင်း ကဲ့သို့ အရိုးအဆစ်များ ဒဏ်ရာ ရရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွင်၎င်းအကြောပြင်ကုသမှုခံယူတဲ့အခါ အသားစ တစ်ရှူးများရဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း သက်သာစေပြီး အဆစ်များရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ၎င်းကုသမှုဟာ အသက်အရွယ်မရွေး လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လူအများစုက ထင်မြင်ယူဆထားတာကတော့ ၎င်းကုသမှုဟာ အသက်ကြီးသူများ အတွက်သာ သင့်တော်တယ်လို့ ထင်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အမှန်တကယ်တော့ အသက်အရွယ်မရွေး ဒီကုသမှုကို ခံယူနိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသူများကတော့ ၎င်းကုသမှုကို နာကျင်မှု ဝေဒနာ သက်သာဖို့အတွက် ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ငယ်ရွယ်သူများက ၎င်းတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှု ဆိုင်ရာ၊ ဟန်ချက်ညီမျှမှု နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းတွေကို အကူအညီဖြစ်ရန်နဲ့ အဆစ်များနာကျင်ခြင်း ပြဿနာမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ၎င်း ကုသမှုကို ခံယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ ၎င်းကုသနည်းဟာ သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော စနစ် ရရှိလာအောင် လှုံဆော်ပေးနိုင်တဲ့ ကုသမှု တစ်မျိုးအဖြစ် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ခံယူထားကြပါတယ်။
၅။ ၎င်းကုသမှုဟာ လူတိုင်းအတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။
ကျောရိုးနှင့် အဆစ်အမြစ်များကို လက်ဖြင့် အနေအထားပြုပြင်သော အကြောပြင်ကုထုံးဟာ သဘာဝအတိုင်း ခန္ဓါကိုယ်ကို ဒဏ်ရာအနာတရသက်သာအောင် ကူညီပေးသော်လည်း အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ ၎င်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ဖြင့် နှိပ်နှယ်ပြုပြင် ကုသမှုဟာ အရိုးပါး၊ အရိုးပွ ဝေဒနာရှိသူများ၊ ကျောရိုးနော့ဗ်ကြောမကြီး အဖိခံထားရသော ရောဂါရှိသူများ သို့မဟုတ် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်း ဝေဒနာခံစားနေရသူများ သို့မဟုတ် သွေးကျဲဆေးများ သောက်နေသူများ သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါ ရာဇဝင်ရှိသူများ အတွက်ကတော့ မသင့်လျော်နိုင်ပါဘူး။
၆။၎င်းပြုပြင် ကုသမှုဟာ ဖျားနာခြင်း မဖြစ်အောင် သင့်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ အရ ၎င်းကုသမှုကို အမြဲတမ်းခံယူနေသူတွေဟာ အဆစ်အမြစ်များ ပျက်စီးခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ထွက်လာခြင်းကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းအကြောပြင် ကုသမှု ပြုလုပ်ခံယူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းစေတဲ့ ကိုယ်ခံအားထိန်းဆဲလ် တွေ ပိုအထွက်များစေကာ သင့်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကို ပိုတိုးစေပါတယ်။
၇။ အကြောပြင်ဆရာက မပြုလုပ်ခင်မှာ အခြားသော ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ အရင်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်
ထိုကဲ့သို့ လက်ဖြင့် အနေအထား ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကုသခြင်းကို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာ ပြုလုပ်ပေးသူဟာ လူနာကို ခန္ဓါကိုယ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်းများကိုတောင် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် သင့်မှာ အရမ်းဆိုးရွားနိုင်တဲ့ ခါးနာခြင်း ၊ ခါးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားခြင်း ရှိမရှိ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာ ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းပြုပြင်ကုသမှုနဲ့ သင့်တော်မှု ရှိမရှိ ဆိုတာကို ဒီစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ၎င်းပြုပြင်ကုသမှုကို လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ပေါင်း၍ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက သင့်အတွက်ပိုပြီး အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
၎င်းပြုပြင် ကုသမှုကို လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် တွဲ၍ ပြုလုပ်ပါက အစာကြေစနစ်ကို ပို၍ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု ပိုကောင်းခြင်းနှင့် ကြွက်သားများတွင် သင့်လျော်သော တင်းအားများ ရှိနေစေခြင်း၊ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်စွမ်းတွေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သက်သေပြခဲ့ပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် လူနာတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ နာကျင်မှု ဝေဒနာကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ရာ ပိုပြီးလွယ်ကူသွားနိုင်ပါတယ်။
၉။ ကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာ အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
အဖြစ်အများဆုံး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ဝေဒနာကို ကျောရိုးအဆစ်များ သို့မဟုတ် ကြွက်သားများမှာ ခံစားရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာ ကုသမှုခံယူပြီး ပထမပိုင်း နာရီအနည်းငယ်လောက်သာ ကြာပြီး ၂၄ နာရီထက်ပိုပြီး ကြာလေ့မရှိပါဘူး။ ဒီလိုနာကျင်မှုဝေဒနာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ရေခဲဝတ်ကပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ။၎င်းပြုပြင်ကုသမှုမှာ တစ်ခြားသော ကောင်းကျိုးများလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဒီလိုပြုပြင် ကုသမှုဟာ လည်ပင်းနှင့် နောက်ကျောတွေရဲ့ နာကျင် ကိုက်ခဲမှုတွေသာမကပဲ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမဆို ဖြစ်နိုင်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲ မှုတွေကိုပါ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းနေရာတွေကတော့ ဦးခေါင်းနှင့် မေးရိုး၊ ပခုံး၊ တံတောင်ဆစ် နှင့် လက်ကောက်ဝတ်အဆစ်များ၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ တင်ပါးဆုံရိုး၊ တင်ပါး၊ ဒူးခေါင်းနှင့် ခြေချင်းဝတ် စတဲ့နေရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးသွားတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ နေရာမှာ လက်ဖြင့် အနေအထားပြုပြင်ပြောင်းလဲ လိုက်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ကျောရိုးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆီဟာ ပြန်ပြီး အနာကျက်ကာ ကောင်းမွန်သွားနိုင်ပါတယ်။
၎င်းဟာ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အန္တရာယ်ကင်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ကုသမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ရှားရှားပါးပါး အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် လူနာဟာ အရိုးအဆစ် ကျွံထွက်သွားခြင်း ၊ပိုဆိုးသွားခြင်း သို့မဟုတ် အဆစ်ကြားချပ်ပြားဝိုင်း ကျွံထွက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပင်းရိုးဆစ်များကို လက်ဖြင့် အနေအထားပြုပြင် ပြောင်းလဲသောအခါ ပိုဆိုးသွားခြင်း စတဲ့ အခြေအနေတွေအားလုံးဟာ ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသွားစေနိုင်ပါတယ်။
Translated by khin yin kyay
Chiropractic Treatments for Lower Back Pain. http://www.spinehealth.com/treatment/chiropractic/chiropractic-treatments-lower-back-pain. Accessed September 6, 2016.
Pain Management Health Center Chiropractic Care for Back Pain. http://www.webmd.com/pain-management/guide/chiropractic-pain-relief?page=2&print=true. Accessed September 6, 2016.
10 Interesting Facts About Chiropractic. http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/10-interesting-facts-about-chiropractic/. Accessed September 6, 2016.
10 Things Most People Don’t Know About Chiropractic. http://www.hoosierhealthplus.com/10-things-most-people-dont-know-about-chiropractic/. Accessed September 6, 2016.